Ejipta: Efa manana fankahalana voajanahary miharo herisetra amin’ny vehivavy mihitsy ve ny Ejiptiana e? · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Efa manana fankahalana voajanahary miharo herisetra amin'ny vehivavy mihitsy ve ny Ejiptiana e?
Voadika ny 14 Aogositra 2010 4:48 GMT
Efa manana fankahalàna voajanahary miharo herisetra amin'ny vehivavy mihitsy ve ny Ejiptiana e ? Tena tsy faly mihitsy amin'ity fironana ara-tsosialy vaovao ity i Zeinobia, ary Mohaly dia mametra-panontaniana hoe mizotra mankaiza isika miaraka amin'ny fanavakavahana, manontany tena i Diptychal ny amin'ny antony itadiavan-dry zareo izay hanampenam-bava azy ireny, ary Eman Hashim dia mangataka ireo renim-pianakaviana mba hitia ny zanak'izy ireo vavy!
Zeinobia dia manomboka ny lahatsorany amin'ny famintinana ny fomba nataon'i Ehab Salah, lehilahy iray mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra, nitifirana ny vadiny:
Tokony ho tamin'ny 4 ora tolakandro, taorian'ny ady saritaka ren'ny mpifanolo-bodirindrina amin-dry zareo, dia novonoin'ilay mpilaza vaovao, Ehab Salah, tao an-tranon-dry zareo i Magda vadiny. Tifitra tokana no namonoan'i Salah ny vadiny, tamin'ny basilava nolovainy tamin'ny rainy efa maty, jeneraly tao amin'ny polisy.
Nisy ny tsilian-tsofina nivoaka momba ny antsipirihan'ilay famonoana:
Nisy fifamaliana am-bava henjana, resaka olana ara-bola, nofelahan-dramatoa rangahy, avy eo nalain-drangahy ny basy dia poa-basy tokana no sady namàrana ny anjaran-dramatoa sy nanapitra ny ainy avy hatrany. Saika ny tranonkala tsirairay no nisàina antsipirihany mampilendalenda mba hampakàrana toy ny efa mahazatra ny fifantohan'ny mpamaky izay efa tafàkatra avoavo kokoa amin'ny resadresaka momba ny ara-pananahan-dry zareo!!
Zeinobia nilaza fa taloha izy dia:
tohina sy nalahelo mafy noho ny resaka fanavahana ny lahy sy ny vavy misavovona any anaty fanamarihana momba ny vono olona anatin'ireo tranonkala maro. Toa zavatra mahavaka saina ny mahita ny ankamaroan'ny lehilahy midera ny fihetsika nataon'i Ehab Salah namono ny vadiny noho ity farany sahy sy namelaka tehamaina azy taorian'ny nampahatsiahivany fa izy (ramatoa) irery no nizaka ny fandanian-dry zareo nandritry ny telo volana farany!!
Tampotampoka teo dia lasa sary dindo/famantarana ny fahenjanana i Salah na dia mifanohitra amin'ny lalàna velona rehetra, ny tokony ho izy, ny fomban-drazana ary ny fivavahana aza ny zavatra nataony, nanjary izy no ilay lehilahy nijoro hanohitra ilay vehivavy niasa ho azy sy nitsangana hanohitra azy, na dia hoe nandray zava-mahadomelina aza izy tamin'ny fotoana nisian'ny famonoana izay voaporofon'ny Biraon'ny Fampanoavana fa “nifoka marijuana izy talohan'ny nanatanterahany ilay heloka bevava “, ary na dia teo aza ny fiahiahian'ny vadiny azy fa hoe manan-draharaha amina vehivavy hafa ivelan'ny tokantrano rangahy izay nahatonga azy ho very fanahy sy faharetana nony nody an-trano rangahy tamin'iny alina farany nisy rà nandriaka iny.
Ny fanamarihana tanatin'ireny tranonkala ireny dia maneho ny fisavovon'ny resaka fanavahana ny lahy sy ny vavy mihatra amin'ny vehivavy ao Ejipta, toy ny hoe zanaka vavin'ny devoly izy reny fa tsy avy amin'I Eva, andevo tokony haverina any tokantranon-dry zareo noho ry zareo manohitra ny tompony taorian'ny fandehanany niasa! Somary mahagaga fa hatrizay dia miara-miasa amin'ny lehilahy foana ny vehivavy tao Ejipta hatramin'ny andro nanjakan'ireo Farao tany amin'ny faritra amoron'ny Nil !!
Namono ny vadiny rangahy noho ny ady iray izay mety hitranga any rehetra any, tokony ho novaliany felaka fotsiny na nangataka fisarahana tsotra taminy izy ary dia ho nahavidy ny haja amam-boninahiny sy ny fahafahany saingy dia novonoiny izy, mpamono olona izay tokony hovonoina ho faty raha araka ny lalàna Sharia amin'ny anaran'Andriamanitra!!??
Dia manontany tena fotsiny aho hoe haja amam-boninahitra hatraiza moa no verin'ireny lehilahy ireny rehefa mahazo felaka tehamaina ry zareo isan'andro izao avy amin'ny fitondrana izay mangalatra ny fahafahan-dry zalahy, ny volan-dry zalahy sy ny tanin-dry zalahy!!??
Mohaly dia nahita iray tamin'ireo taxis “For Women Only – Voatokana fotsiny ho an'ny vehivavy” teny an-dàlana ary tsy vitany ny tsy hanontany tena hoe :
Nahoana ny famantarana rehetra no maneho fa mizotra mankany amin'ny fanasarahana ny fiarahamonina ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy isika. Kalesim-behivavy any amin'ny metro, filaharana an'ny vehivavy, ora natokana ho an'ny vehivavy any amin'ny fanaovan-draharaha samihafa, trano fisakafoanana natao ho an'ny vehivavy fotsiny (toy ny an'ilay [mpisehatra malaza] Hanan Turk), ary farany dia taxi voatokana fotsiny ho an'ny vehivavy ( mariho ). Dia manontany tena aho hoe zavatra hafa inona koa no mbola hatokana ho an'ny vehivavy fotsiny!
Tsy dia manohitra loatra ny fananan'ny vehivavy ny fiainany manokana noho ny antony itsy na iroa aho, saingy matahotra aho sao indray andro any hifoha ka hahita an'i Cairo ho toy ny Riyadh iray hafa – indrindra amin'ny fisian'ireo misora-tena ho mpitondra fivavahana sy Wahabi mandady toy ny trambo ao anatin'ny fiarahamonintsika!
Diptychal mitantara ny fomba nanerena an”i BUSSY – the Egyptian Vagina Monologues – hanakombona ny vavany:
Raha raisina avy amin'izay teny nolazain-dry zareo ihany dia andalam-pizakantena i BuSSy, andalam-panangonana ireo fijoroana vavolombelona mikasika ny zon'ny vehivavy, ary, (amin'ny hevitro manokana ny tena zava-dehibe), manome seha-pitenenana ho an'ireo izay tsy mba nisy mpihaino mihitsy.
Androany aho namaky tao amin'ny ArabLit fa ny farany indrindra tamin'ny zava-bita teo amin'ity fiakarana an-tsehatra ity dia ny fifangaroan'ny fanerena ny olona hihaino sy ny fampiharana ny sivana ataon-tena. Nandritra ny alina voalohan'ny seho an-tsehatry ry zareo, tao amin'ny Tranoben'ny Opera tamin'ity taona ity, nandeha nivoaka daholo ireo mpanatrika. Nokianin'ny mpanatrika ireto vehivavy ireto noho ny niresahany lohahevitra mafana toy ny fanararaotana ankizy sy ny fanesorana ny voaly/saron-tava.
Nampieritreritra ahy izany rehetra izany. Nahoana no nisy an'ireo mpanatrika ireo teny amin'ny toerana voalohany? Nahoana no olona mankahala ny fanehoan-kevitra ankalalahana no mbola tonga manatrika ilay fiakarana an-tsehatra ihany izay efa fantatra loatra amin'ny zavatra ambarany. Tonga tao ve ry zareo ireny, niaraka daholo tanatin'ny toe-tsaina nivonona ny hampandre ny olona ny tiany hambara, haneho ny tsy fahafaliany? Ary angaha moa tsy afaka manana ny zony ry zareo manao izay handrenesana ny feony tahaka izay nataon'ny vehivavy ao amin'ny BuSSy? Tsy dia azoko antoka loatra.
Mety haharay fanakianana mivaivay aho noho ny fanatavezan-dresaka saingy efa tsapako izany. Isika, amin'ny maha-vahoaka Ejiptiana, dia tena ravo tokoa manafina ny lohantsika any anaty fasika ka minia tsy mahalala ny olana mianjady amintsika. Tsy misy na iray aza voan'ny SIDA eto Ejipta. Tsy misy ny mitovy ka mifanambady. Ny tsirairay eto dia samy matahotra an'Andriamanitra daholo. Tsy misy na iray aza amin-dry zareo ho sahy hitifitra fiara fitateram-bahoana feno hipoka “noho ny antony tsy dia ahoana loatra.” Mandeha tsara ny zavatra rehetra.
Noho izany ny lalao an-tsehatra iray toy ny BuSSy dia tokony hokianina satria mampiseho masoandro ireo zavatra sasany tiantsika hafenina.
Ary ny lafiny tena mampalahelo ahy, dia ry zareo noterena hanao sivana ny tenany. Voatery mamadika indroa ny lelany ry zareo alohan'ny hitenenany handrakotra ny tabataba. Ary nifanohitra tamin'ny tanjona izany
Ary indrisy fa dia ny teo ihany no teo manerana ity firenena ity.
Farany, ” Mitalaho aminareo aho! Miangavy, mba tiavo ny zanakavavinareo ” hoy ny kiak’i Eman Hashim:
Raha tsy afaka ianareo, na tsy mihevitra ny hanao, na tsy mahafantatra ny fomba hitiavana ny zanakavavinareo, raha izany dia aza mitondra voary tsy niriana sy tsy hotiavina eto amin'ity tontolo ity.
Raha tsy afaka ny ho namany akaiky ianareo ary tsy ho eo amin'izay olana rehetra mety hitranga, raha izany dia aza atao izay hanànana azy.
Raha tsy afaka hahita fahatokisantena eo aminy fa hampanjary azy ho toy ny mpamalifaly ny hafa fotsiny, raha izany dia aza atao izay hanànana azy.
Raha tsy afaka hitia azy ianareo fa kosa hamela azy hangetaheta fitiavana mandritry ny androm-piainany, raha izany dia aza atao izay hanànana azy.
Raha tsy afaka ny hanoro azy ny làlana mankamin'ny fitoniana anaty ianareo, raha izany dia miangavy…miangavy aza atao izay hanànana azy.
Raha toa ianareo hitondra azy hihevi-tena ho sondenda, botrefona, sy kaondrana, dia hampanjary azy ho toy ny kilalaon-jaza mahantra; raha izany dia aza atao izay hanànana azy.
Ny tahotra, tsy filaminana, tsy fisian'ny fahatokisan-tena sy tsy fahatokisana olona ary ny fiainana dia zavatra tsy veriny miaraka amin'ny fotoana, ny mifanohitra amn'izany aza, hitombo miaraka aminy sy hamotika ny fiainany ireo.
Hotolorana an'ireny aza izy ary avy eo … fankasitràhana ho anareo nitondra fatina voary ratsy teto amin'ity tontolo ity.
Na izy hotolorana hatezerana sy otri-po ka, indray mandeha indray … namelona voary mahonena teto amin'ity tontolo ity ianareo.
Anatina lahatsoratra iray hafa, kitihan'i Eman Hashim avy any ifotony ny fankahalàna:
Aiza no hahafahan'ny tovovavy iray niaritra fanararaotana ara-nofo, ny herisetra an-tokantrano, sy noterena hihatsaravelatsihy hampivelatra fihetsehampo afaka hirehareha sy manana ny maha-izy azy? Ahoana no ho fiantraikan'izay amin'ny fijery azy ety ivelany? Ahoana no tokony hitenenany hoe “Tsia” amin'ny fanambàzana an-terisetra amin'ny resaka firaisana ara-nofo? Ahoana no fomba hahafahany hanavaka ny tsara amin'ny ratsy? Ahoana no hahafahany manana risi-po hijoro hiaro ireo zony?